रबर ग्यास्केट सामग्री चयन गाइड-CIXI DONGFENG सिलिङ र प्याकिङ कं, लिमिटेड
रबर ग्यास्केट सामग्री चयन गाइड
समय: 2022-01-06 हिट्स: 3
ग्यास्केटहरू मेकानिकल सीलहरू हुन् जुन दुई मिलन सतहहरू बीचको खाडल भर्न डिजाइन गरिएको हो। तरल पदार्थ ह्यान्डलिंग र प्रशोधन उपकरणहरूमा, तिनीहरूले प्रक्रिया तरल पदार्थहरूलाई प्रणालीबाट भाग्न र प्रदूषकहरूलाई प्रणालीमा प्रवेश गर्नबाट रोक्छन्।
यसले सुनिश्चित गर्दछ कि प्रणालीले बहुमूल्य सामग्रीहरू बर्बाद गर्दैन वा अनावश्यक सामग्रीहरूको कारणले क्षति भोग्दैन।
तरल प्रणाली मा gaskets को मुख्य कार्य को दृष्टि मा, यो अभिप्रेत आवेदन को लागी सही ग्यास्केट चयन गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। ग्यास्केट डिजाइन र चयन गर्दा ध्यानमा राख्नु पर्ने मुख्य तत्वहरू मध्ये एक सामग्री हो, जुन
कम्पोनेन्टको कार्यसम्पादनमा ठूलो असर पार्न सक्छ। जे होस्, त्यहाँ छनौट गर्न धेरै ग्यास्केट सामग्रीहरू भएकाले, तपाईंको आवश्यकताहरू अनुरूप उपयुक्त हुने एउटा छनौट गर्न गाह्रो वा डरलाग्दो हुन सक्छ। यही कारणले तपाईसँग काम गर्नुपर्छ
अनुभवी गैसकेट निर्माताहरू; तपाईंले सही ग्यास्केट प्राप्त गर्नुभयो भनी सुनिश्चित गर्न तिनीहरूसँग ज्ञान र सीपहरू छन्।
रबर ग्यास्केट सामाग्री को प्रकार
यद्यपि gaskets धेरै सामग्रीबाट बनाइन्छ, सबै भन्दा राम्रो विकल्प मध्ये एक रबर हो। त्यहाँ रबरका धेरै सूत्रहरू र ग्रेडहरू छन्, जसमध्ये प्रत्येकले विभिन्न विशेषताहरू प्रदान गर्दछ, यसलाई विभिन्न अनुप्रयोगहरूको लागि उपयुक्त बनाउँछ:
इथिलीन प्रोपाइलीन डायने मोनोमर (EPDM)
Styrene Butadiene रबर (SBR)
खाद्य ग्रेड (FDA स्वीकृत) रबर
नियोप्रिन क्लोरोप्रिनको पोलिमराइजेशनद्वारा बनाइएको सिंथेटिक रबर हो। यसलाई पोलिक्लोरोप्रिन पनि भनिन्छ। एसिड, क्षार, ग्रीस र तेल, ओजोन, सूर्यको किरण र मौसमको प्रतिरोधको कारण, यसको बहुमुखी प्रतिभाको उच्च डिग्री छ।
र विभिन्न उद्योगहरूमा विभिन्न कठोर वातावरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। योसँग झुकाउने र टोर्सनको लागि उत्कृष्ट प्रतिरोध पनि छ, साथै तापक्रम अनुकूलनताको विस्तृत दायरा (-40° F देखि +230° F, बीच-बीचमा +250° F)।
नाइट्राइल रबर (जसलाई बुना-एन वा एनबीआर पनि भनिन्छ) ग्यास्केट र सिलहरूको लागि सबैभन्दा सामान्य रूपमा प्रयोग हुने लोचदार सामग्री हो। यसमा एसिड, क्षार, पेट्रोल, हाइड्रोलिक तरल पदार्थ र पेट्रोलियम-आधारित यौगिकहरूको लागि उत्कृष्ट प्रतिरोध छ। पनि सक्छ
-40 ° F देखि + 212 ° F को तापमान दायरा सामना गर्नुहोस्। जब हावा पारगम्यता, पानी पारगम्यता र घर्षणलाई विचार गर्न आवश्यक छ, नाइट्राइल रबर पनि एक आदर्श विकल्प हो।
EPDM रबर इथिलीन र प्रोपाइलिन को एक copolymer छ। यसले एसिड, क्षार, बुढ्यौली, गर्मी, अक्सिडेन्ट, ओजोन, सूर्यको प्रकाश, भाप र पानीको क्षतिलाई प्रतिरोध गर्न सक्छ। यसमा रंग स्थिरता र उच्च स्थायित्वको विशेषताहरू पनि छन्, प्रयोगको लागि उपयुक्त
बाहिरी वातावरणमा। यसले -40 ° F देखि 250 ° F सम्म, बीच-बीचमा + 275 ° F सम्म तापमान सामना गर्न सक्छ।
सिलिकन रबर एक उच्च प्रदर्शन elastomer छ। यसमा उत्कृष्ट उच्च र निम्न तापक्रम विशेषताहरू छन् र यसले -75°F देखि +500°F सम्मको तापक्रमलाई सहन सक्छ। यसले बुढ्यौली, अक्सिजन, ओजोन,
पराबैंगनी प्रकाश, पानी र मौसम।
Viton उत्कृष्ट रासायनिक प्रतिरोध र उच्च तापमान प्रतिरोध द्वारा विशेषता एक उच्च प्रदर्शन रबर सामग्री हो। यसमा उच्च तन्य शक्ति र कम कम्प्रेसन सेट पनि छ। यो तापमान दायरा लागि उपयुक्त छ
-१५°F देखि +४००°F र बीच-बीचमा +५००°F सम्म।
SBR (रातो रबर पनि भनिन्छ) styrene र butadiene को एक सिंथेटिक copolymer हो। यो flange gaskets को लागी एक लचिलो र लागत प्रभावी विकल्प हो। मुख्य विशेषताहरूमा उत्कृष्ट तन्य शक्ति, प्रभाव शक्ति, abrasi समावेश छ
- प्रतिरोध, गर्मी प्रतिरोध र कम तापमान लचिलोपन मा। यो -67 ° F देखि + 180 ° F को तापमान दायराको लागि उपयुक्त छ।
Butyl रबर isobutylene र isoprene को एक copolymer छ। यसमा उत्कृष्ट कम ग्याँस, हावा र आर्द्रता पारगम्यता छ। साथै, यसमा उत्कृष्ट घर्षण प्रतिरोध, एसिड प्रतिरोध, क्षार प्रतिरोध, गर्मी बुढ्यौली प्रतिरोध, अक्सिजन पनि छ।
प्रतिरोध, ओजोन प्रतिरोध, सूर्यको किरण प्रतिरोध, आँसु प्रतिरोध र मौसम प्रतिरोध। यो -60 ° F देखि + 250 ° F को तापमान दायराको लागि उपयुक्त छ।
प्राकृतिक रबर दूधको सेतो रस वा रबरको रूखको लेटेक्सबाट निकालिएको लोचदार सामग्री हो। यसलाई गम रबर पनि भनिन्छ। यसमा उत्कृष्ट तन्य शक्ति, लचिलोपन, घर्षण प्रतिरोध र आँसु प्रतिरोध, कम्प्रेसन सेट र
मोल्डेबिलिटी। यो कम तापक्रममा पनि नरम र लचिलो रहन्छ। यो -60 ° F देखि + 175 ° F को तापमान दायराको लागि उपयुक्त छ।
इन्लाइड (फैब्रिक प्रबलित) रबर ग्यास्केट इनलेड रबरले कपास, गिलास फाइबर, पलिएस्टर वा नायलन कपडाले गर्भाधान गरिएको रबर पाना सामग्रीलाई बुझाउँछ। कपडाले सामग्रीलाई सुदृढीकरण प्रदान गर्दछ, यसको आयामी स्ट्या सुधार गर्दछ
- उच्च कम्प्रेसिभ लोड अनुप्रयोगहरूमा क्षमता र फिक्सेसनको समयमा यसको आँसु प्रतिरोध।
Polyurethane धातु को बल र स्थायित्व संग रबर को लोच को संयोजन गर्दछ। यसमा सबै लोचदार सामग्रीहरूको सबैभन्दा ठूलो कठोरता र पहिरन प्रतिरोध छ। यो रेसिस्टाको हिसाबले प्लास्टिक, स्टिल र अन्य रबरहरू भन्दा उच्च छ
-केमिकल, तातो र विलायकहरूमा, र उत्कृष्ट तन्य शक्ति, कम्प्रेसिभ बल, आँसुको बल, कठोरता, इत्यादि प्रदान गर्दछ। यो -60° F देखि +180° F सम्मको तापक्रम दायराको लागि उपयुक्त छ।
खाद्य र पेय पदार्थ उद्योगमा FDA-चिह्नित gaskets FDA-अनुमोदित सामग्रीबाट बनेको हुनुपर्छ। यी सामग्रीहरूलाई उपभोग्य वस्तुहरूमा प्रयोगको लागि सुरक्षित मानिन्छ किनभने तिनीहरूले ब्याक्टेरियाको संचयमा अन्तर्निहित प्रतिरोध प्रदर्शन गर्दछ, a
व्यापक परिचालन तापमान दायरा, र उत्कृष्ट रासायनिक प्रतिरोध। साथै, तिनीहरू गंधहीन र स्वादहीन छन्।
तपाईंको ग्यास्केट अनुप्रयोगको लागि सही रबर सामग्री छनौट गर्न मद्दत चाहिन्छ? अनुकूलन ग्यास्केट निर्माण विशेषज्ञबाट मद्दत खोज्नुहोस्! धनी निर्माण अनुभव र क्षमताहरु संग, हाम्रो टोली उच्च गुणस्तर gaskets, सिल प्रदान गर्न सक्छ
वा समय र बजेट मा अन्य रबर उत्पादन समाधान। हाम्रो अनुकूलन gaskets बारे थप जान्नको लागि, कृपया हामीलाई अहिले सम्पर्क गर्नुहोस्। मूल्य निर्धारण विवरणहरूको लागि, कृपया उद्धरण अनुरोध गर्नुहोस्।
अर्को: सील रिंग को सेवा जीवन